Wararka Maanta: Isniin, Apr 2 , 2012-Iskahorimaad degmada Ceelbuur ku dhexmaray Xoogagga Ahlusunna Waljamaaca iyo kuwa Xarakada Al-shabaab
Iskahorimaad degmada Ceelbuur ku dhexmaray Xoogagga Ahlusunna Waljamaaca iyo kuwa Xarakada Al-shabaab Isniin, Abriil 02, 2012 (HOL) — Dagaal sababay khasaare dhimasho ayaa xalay ku dhexmaray degmada Ceelbuur xoogagga Ahlusunna iyo Al-shabaab, iyadoo durba ay guulo ka sheegteen dagaalka mas'uuliyiinta Ahlusunna.
Madaxa howlgallada ee Ahlusunna, Cabdiweli Siyaad ayaa sheegay in ciidamadooda ay iska difaaceen weerar lagu soo qaaday ayna goobtaas ku dileen laba ka mid ah xoogaggii weerarka soo qaaday.
"Dagaalku wuxuu ahaa mid fashilmay, waxaana goobtii lagu dagaalamay yaalla laba ka mid ah xoogaggii Al-shabaab ee weerarka soo qaaday," ayuu warbaahinta u sheegay madaxa howlgallada ee Ahlusunna.
Sarkaalkan wuxuu sheegay in qorshahoodu yahay inay la wareegaan goobaha ay kaga sugan tahay Al-shabaab gobolka Galguduud, kuwaasoo uu sheegay inay yihiin kuwa ay kasoo abaabulaan weerarrada ay soo qaadayaan.
Dhanka kale, Xarakada Al-shabaab oo ka hadashay dagaalkii xalay ayaa sheegtay inay weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada Itoobiya kuwa Ahlusunna, balse ma sheegin khasaare ay u geysteen.
Degmada Ceelbuur oo ahayd xarunta ugu weyn ee Al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka Galguduud ayaa waxaa bishii hore iyadoo aanu dagaal dhicin la wareegay cidiamada Itoobiya iyo kuwa Ahlusunna oo isgarabsanaya.
Isniin, Abriil 02, 2012 (HOL) — Guddoomiyaha majmaca culummada Soomaaliyeed, Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow ayaa soo dhaweeyay hadalkii Sheekh Xasan Daahir Aweys uu dhawaan jeediyay, kaasoo ku saabsanaa in Al-shabaab aysan dilin dadka shacabka ah isla markaana aysan u caga-jugleyn. Qulqulka qoysaska kasoo barakacaya Deegaanada Duleedka Muqdisho oo laga dareemayo Jidadka Muqdisho 4/2/2012 8:22 AM EST